Izindaba - Ibhodlela lokubonisa lokushisa
Ibhodlela lokubonisa lokushisa
Ukuxazulula inkinga yamanzi okuphuza ebusika, ukhetho lokuqala ekwindla nasebusika-ibhodlela le-thermos
Ekupheleni kukaSepthemba, isimo sezulu sabanda masinyane, futhi kwakuzoba nokukhanya kokubandayo njalo ekuseni nakusihlwa. Eqinisweni, ngaphezu kokugqoka okuningi, ukunaka imfudumalo kungaxazulula inkinga enkulu. Kule nkathi, singakhetha amanzi ashisayo afudumele esikhundleni samanzi abandayo abandayo, ikakhulukazi ekwindla lapho kufudumele futhi kubanda. Futhi kunamabhodlela ama-thermos amaningi emakethe. Kungashiwo ukuthi zonke izinhlobo. Ngakho-ke ingabe kukhona ibhodlela le-thermos elihlanganisa ukwahlukanisa kwesikhathi eside kanye nokuthwala okuqinile?
Leli bhodlela elingenalutho elingenalutho lihlangabezana nazo zonke izidingo zami zamabhodlela okugcoba. Ngokuya kokufanisa umbala, kunemibala eminingi ongakhetha kuyo futhi engenziwa ngezifiso. Isikimu sombala esimsulwa singakhuphula ukuqashelwa futhi sigweme amaphutha. Ngasikhathi sinye, ubuchwepheshe be-pearlescent ebusweni buthuthukisa kakhulu ikhwalithi yebhodlela, noma lingasetshenziswanga, lizobukeka lihle etafuleni.
Usayizi nawo ulungile, ngobude obungu-235mm nobubanzi obungu-65mm, akunankinga ngokuwuthwala nsuku zonke. Isisindo silawulwa cishe ku-180g, okungafani kakhulu nesisindo somakhalekhukhwini esivame ukusisebenzisa. Ngamandla okuzikhethela ka-300 ~ 500ml, akusekho, akukho ngaphansi, ukupheka ikhofi okukodwa kungahlangabezana ngokugcwele nokuphuza kwabantu abaningi.
Eqinisweni, umgomo webhodlela le-thermos ucishe ufane, konke okuthuthukisa umthelela wokufaka ngokwandisa ukungangeni komoya. Vele, leli bhodlela le-thermos alikho ngaphandle, kepha kungashiwo ukuthi yilona elihamba phambili ekuvaleni. Leli bhodlela le-thermos linomsebenzi omusha wokufaka esikhundleni sebhethri, ongaqapha futhi ulawule ukushisa kwebhodlela nganoma yisiphi isikhathi noma kuphi, futhi kufinyelele ekugcineni ekugcineni.